“Xavi wuxuu noqon doonaa macalinka kooxda Barcelona” – Josep Maria Bartomeu – Gool FM
(Barcelona) 13 Luulyo 2020. Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa xaqiijiyay in Xavi Hernandez uu la wareegi doono shaqada tababarka ee kooxda goorta ay noqoto, isagoo cadeeyay inuu si buuxda diyaar ugu yahay inuu qabto shaqadaas.
Xavi Hernandez ayaa lala xiriirinayay inuu la wareegi doono shaqada tababarka ee kooxda Barcelona, laga bilaabo xilli ciyaareedka soo socda, kaddib markii uu tababare Quique Setién ku hoggaamiyay kooxda natiijooyin xun xilliyadii la soo dhaafay, taasoo sababtay in Real Madrid ay kali ku noqoto hoggaanka, sidoo kale waxay ku dhow dahay inay ku guuleysato koobka horyaalka.
Laakiin halyeyga kubadda cagta Spain iyo naadiga Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa u cusbooneysiiyay qandaraaska maalmo ka hor kooxdiisa Al Sadd.
Haddaba sida laga soo xigtay wargeyska “Sport” ee dalka Spain Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartome ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Xavi wuxuu la wareegi doonaa shaqada tababarka ee kooxda Barcelona sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu macquulsan”.
“Waa shaqsi u qalma arintaas, wuxuuna doonayaa inuu tababare u noqdo Barcelona, waa gurigiisa, xaqiiqdii waxay noqon doontaa waqtigii uu qaadan lahaa mas’uuliyada tababarka ee kooxda”.